China Yoga ndị na-anụ ọkụ n'obi na-eme Yoga Na Bangkok, ndị na-emepụta Thailand na ndị na-eweta ya | Mmiri mmiri
Thailand bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa iji eme yoga.
Ihe Mere I Kwesịrị Iji Na-eme Yoga na Thailand
Otutu ndi nkuzi yoga di egwu na aga Thailand na usoro ihe ijuanya. Ọtụtụ ndị na-akụzi ihe n'ụwa emeela Thailand ụlọ ha! Nke a na-ekwe nkwa na a ga-enwe ọtụtụ akụ na ụba yoga na mgbagha ịhọrọ site na mgbe ọ bụla ị na-eme atụmatụ njem gị.
Kedu ihe ọzọ, ndị nkụzi a ga-emerịrị obodo yoga na-agwụ ike. Ga-ahụ ụlọ mgbe ị gara nleta yoga na Thailand na nke mbụ gị. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka klaasị ịkọkọ nri ọnụ mgbe emechara ya, na nnabata, udo sabai sabai nke Thailand metụtara ya.
Ndị a bụ obodo 3 nke Yoga kacha mma Yoga, na ebe ị ga-eme ihe:
Thailand bụ n'ezie anwansi, ọ bụkwa n'ụlọ ọtụtụ ebe egwuregwu yoga na mba ahụ niile. Ndị a bụ ole na ole n'ime ihe ndị ahụ magburu onwe ha yoga yoga!
Busy Bangkok nwere ike ịbụ abụghị ebe mbụ ị ga-eche ma a bịa n'ute yoga gị, mana ọ na-agba ya ara bụ ihe zuru oke iji jikọghachi omume gị. Ọ bụ ezie na isi obodo anaghị enye ohere maka yoga dị jụụ ebe ị ga-ahụ ebe ọzọ, obodo ahụ na-etu ọnụ maka ụfọdụ ụlọ ọrụ mara mma.
Na Bangkok, ndị nkuzi ahụ dị oke egwu ma rara ụlọ ọrụ ahụ nye - kwụsị maka klaasị na Yoga Elements nke a tụlere “ụlọ yoga kacha mma Bangkok” ma ọ bụ Absolute Yoga iji dọghee gị na Big Mango tupu ị gawa ebe ị ga-apụ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-achọ usoro ọdịnala, chọpụta Iyengar na-agba agba na Empower Yoga.
2. Agwaetiti ndị ahụ
Mmiri doro anya na mmiri turquoise, nkwụ na-efegharị na nnukwu ugwu - agwaetiti Thai kwesịrị ka ewu ewu ha niile ma bụrụ n'ezie ebe mara mma iji mụọ yoga. Oge na-egbu oge n’agwaetiti nile, ọdịdị gbara gị gburugburu, na ọnọdụ okpomọkụ na-enyere gị aka ịtọpụ ma nwee ahụ iru ala.
Nwere ike ịchọta obere ụlọ ọrụ yoga na obodo ọdịmma dị n'ọtụtụ agwaetiti ndị a na-agakarị, dị ka Koh Tao, Koh Lanta na Samui, mana otu n'ime ebe kachasị mma ịga leta yoga bụ Koh Phangan.
Site na yoga dị egwu, Koh Phangan bụ ebe ụfọdụ ama ama ama ama ama n'ụwa gụnyere isi ụlọ ọrụ ụwa nke Agama Yoga na Sanctuary, ebe ezumike mara mma nke na-enyekwa ọgwụgwọ detox na spa. Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị imecha ọzụzụ nkuzi ndị nkuzi yoga gị na mpaghara ndịda Thailand, lelee Jivani Yoga.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ "Rose nke North" - Chiang Mai. Site na ndị bi na 200,000, Chiang Mai bụ ugwu kachasị ukwuu na ugwu Thailand. Ugwu ya nile na-eju eju, nsụda mmiri juru eju, na jụụ ji nwayọọ na-ezu ọtụtụ mmadụ.
Echere m na Chiang Mai, yana akụkụ ndị ọzọ nke ugwu, bụ ebe kachasị mma iji jikọta ọdịdị, omume yoga gị, na gị onwe gị. Enwere obere ihe maka onye ọ bụla ebe a - nri dị egwu, ebe mara mma, ndụ ndụ abalị, na ebe a na-agbapụ-na mba na-eme nke ọma.
Gaa klaasị ọ bụla na otu ụlọ ihe nkiri dị nso na Old City, dịka Namo Chiang Mai ma ọ bụ Wild Rose Yoga, ị ga-ahụ ozugbo na ndị nkuzi yoga na-ekpo ọkụ bụ ndị kpọrọ ụlọ ebe a pụrụ iche nabatara gị. Ndụ ibi ndụ na imesi ike ibi ndụ eke na-eme ka ugwu bụrụ ebe zuru oke iji lekwasị anya na omume gị.